Iitattoos zeeroses kunye neentsimbi: intsingiselo kunye nokuqokelelwa koyilo | Ukuzoba
UAntonio Fdez | 10/07/2021 21:41 | Ukuhlaziywa ukuba 24/07/2021 21:31 | Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo
Ngaba ujonge izimvo zetattoo yakho elandelayo? Ukuba ucinga ukwenza i I tattoo entsha kwisitayile seSikolo esiDala, sinesindululo esinomdla kakhulu esiya kuthi siqwalasele ingqalelo yakho.
Ku malunga ne Iitattoo zeeroses kunye neenjuba. Umxube wezinto ezimbini uthandwa kakhulu phakathi kwabathandi bamathambo akudala. Sele siziphathe ngokwahlukeneyo iitattoos, ngoku siza kuqokelela indibaniselwano yezi zimbini kwaye sikwazise ngentsingiselo yazo kunye nemibono yazo ukwenza uyilo lwakho lube lolodwa. Qhubeka ufunda!
1 Intsingiselo yeetattoos zeeroses kunye nemingxunya
1.1 Intsingiselo yeempawu zeedrim
1.2 I-rose kunye nekrele kunye
2 Iingcamango zeTattoo ngeentyatyambo kunye neentsimbi
2.1 Ikrele eliqhelekileyo kunye ne tattoo
2.2 Ixhoba kwaye yaphakama ngasemva
2.3 Umvambo ngeentyatyambo, intliziyo kunye nekrele
2.4 Umvambo omnyama nomhlophe
2.5 Umkhono we tattoo ngekrele kunye nokuvuka
2.6 I-Panther, ikrele kunye nokuvuka
2.7 I-Dagger, ivukile kunye nebhinqa eliyinyani
2.8 I-Dagger kunye ne-cherry zityatyamba itattoo
3 Iifoto zeRoses kunye neeDaggers Tattoos
Intsingiselo yeetattoos zeeroses kunye nemingxunya
Los Iitattoos zeeroses kunye neenjuba zinophawu olunomdla Kuba zombini intsingiselo yeentsimbi kunye neyeeroses zidityanisiwe. Kufuneka sihlalutye ngokwahlukeneyo intsingiselo yento nganye eyenza ezi tattoos zinomdla kwaye zibetha.
Intsingiselo yeempawu zeedrim
IiTattoo tattoos zimele isimboli esihambelana nokunikela. Kwaye kwanele ukujonga emva. Kukho iinkcubeko ezininzi ezazisebenzisa ikrele njenge "sixhobo" esingabalulekanga kulo naliphi na isiko lesilwanyana okanye kwedini lomntu. Kungenxa yoko le nto abantu abagqiba ekubeni bahlanganise ikrele emizimbeni yabo benza oko ukubonisa ukuba bakwazile ukoyisa iimeko ezintsonkothileyo eziphawule ubukho babo obubalulekileyo. Iincukuthu, kwelinye icala, zinokufuzisela ukungcatsha (masingalibali, umzekelo, amabinzana afana nokuthi "hlaba umhlabi" nentsingiselo yawo isekelwayo). Kukwakho namanqaku aliqela esiwanikezele kwiiTatuantes kuwo IiTech tattoos.
Iintsingiselo zeRose tattoos
Kwelinye icala, nanjengoko besesitshilo kumanqaku angaphambili, I-rose tattoos iya kwahluka ngentsingiselo kuxhomekeke kumbala weentyatyambo uqobo. Umzekelo, iiroses ezimthubi zinxulunyaniswa nolonwabo kunye nolonwabo, ngelixa iirozi zendalo zibonisa uthando kunye nothando. Bayaziqhelanisa nokunxibelelana nobomi, uthando kunye nokwabelana ngesondo, ngakumbi ukuba ziintyatyambo ezintsha. Ukuba ufuna ulwazi ngakumbi malunga Intsingiselo yeetatoo rose Ndikucebisa ukuba ujonge iiposti zethu zangaphambili.
I-rose kunye nekrele kunye
Ngoku sibonile intsingiselo yezi zinto zimbini ngokwahlukeneyo, masijonge kunye. A) Ewe, Iitattoo zeeroses kunye neentsimbi zihlala zibonisa uphawu lobomi: i-rose imele amaxesha amnandi, ulonwabo, ubomi kunye nobuhle ngelixa ikrele luphawu lwexesha elinzima kunye necala elimnyama, elifihlakeleyo nelibukhali.
Banokusetyenziswa njenge isimboli sokungcatsha, ngokucacileyo emelwe ngumkhonto, kunye nothando oluthandekayo lwerosi, isikweko sothando lwesini.
Ngapha koko, ukuba ikrele lihlaba irosa (ngakumbi ukuba ikhatshwa ngamaconsi egazi) intsingiselo ithatha indawo ukujija okusha apho "icala elimnyama" (ikrele) libetha ubomi (i-rose).
Iingcamango zeTattoo ngeentyatyambo kunye neentsimbi
Emva koko siza kukunika iimbono ezimbalwa ukuze iitattoos zakho zeeroses kunye nemikhonto yahluke. Uya kubona ukuba, ukongeza kwisitayile sendabuko, mhlawumbi saziwa kakhulu, zininzi ezinye izinto ezenziwayo kunye nezitayile.
Ikrele eliqhelekileyo kunye ne tattoo
Enye yeefom zakudala zale tattoo yile isebenzisa isimbo sendabuko. Ngokusebenzisa imigca eshinyeneyo kunye nemibala eqaqambileyo, engacacanga, sisitayile esikhangeleka sihle kule tattoo.njengoko isebenza ukuhambisa amandla oyilo, kunye nokuqaqambisa izinto ezimbini ngokwahlukeneyo, ngakumbi ukuba kusetyenziswe imibala emnyama kwidolo kunye nobomvu oqaqambileyo kwirosa.
Ixhoba kwaye yaphakama ngasemva
Ukuba ufuna uyilo olukhulu, umva yindawo yakho. Nangona inokuba iyilo elime nkqo, ngenxa yesimo sesinkempe, ukuba inobungakanani obukhulu entanyeni nasemazantsi iya kujongeka intle. Ukuba ufuna ukuyinika ivolumu engaphezulu, cinga ngokususa i-rose, njengakwifoto, ukuze ithathe indawo engaphezulu. Yindawo apho iitattoo ezinenyani ezineenkcukacha ezintle nazo zipholile.
Umvambo ngeentyatyambo, intliziyo kunye nekrele
Iintliziyo zezinye zezinto ezidityaniswe kakhulu ngeentshuntshu kunye neentyatyambo, kuba zihlala zibonisa ukungcatshwa kunye nokudana. Iiroses zinomsebenzi, kolu luyilo, ukuthambisa umyalezo kancinane (ukongeza, banamaqabane aqhelekileyo entliziyo): nangona intliziyo yaloo mntu iye yangcatshwa, iyaqhubeka nokubona ubuhle bobomi.
Umvambo omnyama nomhlophe
Ngomdla obalaseleyo, yiya kuyilo olumnyama nomhlophe. Ikwajongeka intle kwisitayile sendabuko okanye isitayile esilula. Ngokusebenzisa le mibala kuphela iya kuthi ixhase uyilo oluncinci, iyenza ilungele abo bangasifuni isiqwenga esikhulu kakhulu.
Umkhono we tattoo ngekrele kunye nokuvuka
Iintsimbi kunye neentyatyambo, ekubeni ziyilo lohlobo lwakudala, zikwahamba kakuhle kakhulu nolunye uyilo. Kwimeko yefoto, ngumvambo ogubungela yonke imikhono ngamaqhekeza amancinci okanye amancinci, kodwa zonke zilandela isitayile esithile kunye nombala ofanayo wombala, ukuze zingangqubani.
I-Panther, ikrele kunye nokuvuka
Ukuba uthanda into enoburharha, unokukhetha khapha ikrele kunye nokuvuka kwesinye isilwanyana. Nangona kule meko kukhethwe i-panther, iinyoka zixhaphake kakhulu, amanye amakhosikazi ezona tattoos zakudala. Khumbula ukuba kuxhomekeke kwisilwanyana osikhethileyo, intsingiselo ye tattoo iya kwahluka, kuba iya kudityaniswa nayo.
I-Dagger, ivukile kunye nebhinqa eliyinyani
Kukho amanye amatyala apho iitattoos zeeroses kunye nemikhonto ingezizo ii-protagonists, kodwa endaweni yoko zihamba nesiqwenga kunye nokunye ukubalasela. Le yimeko yoyilo, eyenziweyo ngumculi we tattoo kwaye ehombisa i-skateboard, nangona inokwenziwa kulusu lomntu. Apha lo mfazi ngoyena mntu uphambili kuyilo kunye nerose kunye nekrele, nangona kubalulekile kwintsingiselo yokugqibela yesiqwenga, hlala ngakumbi ngasemva.
I-Dagger kunye ne-cherry zityatyamba itattoo
Ekugqibeleni, Asinakulibala ukuba, ukongeza kwiiroses, zininzi ezinye iintyatyambo ezinokubonakala zintle ngemikhwa.. Ngokukodwa ukuba uthanda iitattoo zaseJapan, apho unokukhetha khona intyatyambo yesiJapan (kolu luyilo, kukhethwe imithi yeetsheri, nangona inokuba ziichrysanthemums, iintyatyambo zeplamu ...) kunye nesabula samurai.
Siyathemba ukuba ulithandile eli nqaku kwiitattoos zeeroses kunye neenjuba. Khawusixelele, unayo itattoo enje? Ithetha ntoni imeko yakho? Ngaba ukhethe siphi isimbo? Khumbula ukuba ungasixelela into oyifunayo kumagqabaza!
Iifoto zeRoses kunye neeDaggers Tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » Iitattoos zeeroses kunye neentsimbi: ingqokelela yoyilo
Ukuqokelelwa kweetali zebhaluni, ukubonisa ukhuthazo kunye nenkululeko